WARBIXIN KU SAABSAN: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 4 April 2020	• 27 Comments
Waxaa jira sabab aad u fudud oo aad u dhihi karto fayras guud ahaan lama faafin karo iyo sababta filimada sida kuwa hoose ee maqaalkaan ay yihiin kuwo si qurux badan loogu hago filimaanta dacaayadda. Taasi waa sababta oo ah fayrasku ma gurguuran karo ama iskiis uma dhaqaaqi karo; sidoo kale cudurka 'coronavirus' ma ahan bakteeriya, […]
In kasta oo cabsi weyn laga qabo bulshada dhexdeeda iyo qadarka weyn ee kala-baxa oo meel walba ku faafa, si aaney dadku mar dambe u arkin duurka geedaha oo si istiraatiiji ah loogu celiyo “khubarada” warbaahinta guud iyo siyaasada, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo waco isbadal wanaagsan samee. Dadaalkaas wuxuu umuuqdaa […]
Tom Barnett wuxuu leeyahay waa dhakhtar guud. Wuxuu bartay cilmiga cilmiga bayoolajiga ka hor inta uusan galin cilmiga caafimaadka dabiiciga ah, nafaqada, jimicsiga jirka, xaalad tayo sare leh iyo cilmi nafsi. Wuxuu seegay inta badan XNUMX-meeyadii iyo XNUMX-meeyadii sababo la xiriira tallaalka iyo dhaawaca amalgam oo wuxuu noqday nin xamaasad u leh xuquuqdeena caafimaad gudaha [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 31 Maarso 2020	• 18 Comments
Waqtigan xaadirka ah su'aalo badan ayaa ku soo dhacaya sida: “Goormaad filanaysaa in dukaamada iyo makhaayadaha ay dib u furaan oo markale fasax u aadi karaan? Tan waxaan u weydiinayaa maxaa yeelay ninkaygu wuxuu ku jiraa warshadaha soo-dhaweynta. ” ama “Sideed u aragtaa suuqa guryaha? Miyuu caqli leeyahay in gurigayga la iibiyo? ", Laakiin sidoo kale […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 31 Maarso 2020	• 26 Comments
Horaan waxaan u sharxay in ay u egtahay in Q Anon ay tahay shabaqa nabdoon ee dadka arka in uu ku sii kordhayo fayraska corona (eeg halkan iyo halkan). Ereyga 'Q' wuxuu aad ugu eg yahay mid gaaban oo saf ah ama saf ah ama isu imaatin; waxaad u […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 Maarso 2020	• 4 Comments
Jarmalku wuxuu rabaa inuu horumariyo barnaamij muddo gaaban gudahiisa ah kaasoo isha ku haya cidda taleefoon gacmeedka taleefanka kula xiriirtay, sida ay qortay Reuters Isniintii. Wadanku sidaas ayuu raacaa talaabooyinka Singapore. Barnaamijka 'Singapore' wuxuu ku diiwaangeliyaa taleefanka Bluetooth markii taleefanka casriga uu u dhow yahay taleefan kale. Mise milkiilaha taleefanka gacantu waa inuu leeyahay coronavirus […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 Maarso 2020	• 14 Comments
Cusbooneysiinta Coronavirus: Xusuusnow markii aan idhi kama dambayn Abriil 6 (eeg halkan tusaale ahaan). Sida la saadaaliyay, kordhinta talaabooyinka ayaa sidaa darteed maanta lagu dhawaaqay. Dhammaanteen way fududahay in la arko oo la sii saadaaliyo sababta oo ah waxaan goob joog u nahay qoraalka 'master'. Markaad fahanto qoraalkaas sayidka ah, waxaad sidoo kale awoodaa inaad […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 28 Maarso 2020	• 26 Comments
Waa muhiim in mar kale laga wada hadlo Q Anon, maxaa yeelay dad badani waxay u muuqdaan inay rumeysan yihiin waxa faylalka Q Anon leeyahay. Waxay rumeysan yihiin inay jirto dowlad qoto dheer oo Trump uu nadiifin doono. Qoraalkeygu waa: Waxaa jira qoto dheer oo qoto dheer oo ay ku jiraan Trump iyo Q Anon. Ciyaartaas oo ah […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 Maarso 2020	• 17 Comments
Maqaal ay soo saartay NRC maanta waxay cadeyneysaa in gaar ahaan ragga iyo waayeelka ay u dhintaan cudurka coronavirus. Xigasho laga soo xigtay qodobkaas: Dhibaatada weyn ee Covid-19 ayaa ah waxa loogu yeero duufaanka cytokine, kaasoo dhici kara marka fayraska sambabka uu daran noqdo. Waa fal-celin xoog leh oo aan xakameynin nidaamka difaaca ee ka soo horjeeda tirada badan ee fayras, […]
Muxuu yahay wajiga dhabta ah ee nidaamka ku faafaya siyaasadaha iyo warbaahinta iyada oo lala kaashanayo mucaaradka la xakameeyay? U fiirso astaanta qaansoroobaad. Qaansoroobaadku miyuu astaan ​​u yahay amarka adduunka cusub? Dunidu miyuu daadku ku ruxmay mowjad mooryaan ah oo la mid ah wakhtigii Nuux? Maxaa mar kale u muuqday […]
Guud ahaan Wadarta: 1.402.739
SandinG op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Xaraare Xareed op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?